Kooxda Liverpool oo guul ku bilaabatay horyaalka Premier League – Bandhiga
Kooxda Liverpool oo guul ku bilaabatay horyaalka Premier League
Kooxda Liverpol aya guul ka gaartay furitaanka horyaalka Premier League kulan ay wajaheen kooxda Dib ugu so laabatay Horyalka Heerka Kowad ee Norwich City.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Liverpool ee Anfield aya waxa uu ku bilowday dar dar xoogan oo ay ciyaarta laso galeyn xidigaha Reds-ka,halka kuwa Norwich City ay ku jahwarereyn la qabsiga kulanka.
Bilowga ciyaarta daqiiqadii 7aad waxa gool iska dhaliyay daafaca Norwich Grant Hanley,daqiiqadii 19aad Mo Salah aya racsaday gool,Van Dijk aya madax ku dhuftay Kubad gees laad aheyd,halkaDivock Origi uu dhaliyay goolki 4aad ee ciyaarta.
Macalinka Norwich oo u muuqday mid qeybtii Kowad ee kulanka uu dul duleel xogan uu ka muuqday safkooda aya waxa uu sameyay isbadal koxdisa ciyaaristeda ah.
Dhaliyaha Norwich City Teemu Pukki aya daqiiqadii 64aad u dhaliyay goolka qura ay ciyaartasi ka dhaliyeen.
Liverpool waxa ka dhawacmay kulankaasi shabaq ilaaliyahoda Alisson Becker,kasi oo lo badinay0 inu sedex todobad maqnaan doono,waxana kulanki xalay nasiib u yeeshay gool hayahoda labad ee Adrian inu buuxiyo kaalintiisii.
Safka Klopp aya u muuqda kuwa aasay shakigii laga qabay inay bandhig fiican sameyn karaan xili ciyaareedkan,kadib markii ay natiijoyin an fiicneen ay kenen kulamadii isu diyarinta xili ciyaaredka.
Liverpool ayaa haatan guuleysatay 12kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay ka horyimaadaan kooxaha kasoo dalacday heerka labaad, iyagoo dhaliyay 35 gool islamarkaana laga dhaliyay kaliya afar.
Trent Alexander-Arnold ayaa ah ciyaaryahankii ugu horreeyay ee diiwaan galiya caawinta shan kulan oo xiriir ah oo Premier League ah tan iyo Mesut Özil sanadkii 2015, waana mid ka mid ah sideed ciyaaryahan oo sidaas sameeyay taariikhda Premier League.
Liverpool waa kooxdii ugu horreysay ee dhalisay 4-gool qeybta hore ee kulanka kowad ee Horyalka (MD1) ee xilli ciyaareed Premier League ah tan iyo bishii Agoosto 2006, markaasoo Man Utd ay afar gool ka dhalisay Fulham.